Google karịrị Apple ọzọ wee bụrụ ụlọ ọrụ kachasị baa uru | Esi m mac
Google agabigala Apple ma ghọọ ụlọ ọrụ kachasị baa uru
Daysbọchị ole na ole gara aga, akwụkwọ akụkọ Forbes depụtara Apple ọzọ dị ka ụlọ ọrụ kachasị baa uru n'ụwa, ihe dị n'ime ụbọchị ole na ole agbanweela na ọ bụ na Alphabet / Google karịrị ụlọ ọrụ ahụ site na Cupertino, nke dị ka na-agabiga oge ihe isi ike mgbe ihe karịrị afọ iri nke uto.
Akwadowo nke a mgbe amaara na ọtụtụ ndị ọchụnta ego kachasị ukwuu na Apple ekpebiela itinye onwe ha niile nke ụlọ ọrụ ahụ ihe nke a pụtara. O yiri ka mgbe nsonaazụ ego kacha ọhụrụ nke Tim Cook gosipụtara, enwere ọtụtụ ndị na-etinye ego ewerela isi ha.
Forbes etinyela Apple ụbọchị ole na ole gara aga dịka ụlọ ọrụ kachasị baa uru nke 2016, ihe ruru nde dollar 155.000, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu abụọ ihe anyị nwere ike ịchọta na Google. O sina dị, ọ dị ka ahịa ahịa anaghị eche n'otu ụzọ ahụN'okwu a, Google bụ ụlọ ọrụ kachasị baa uru dị ugbu a. Gịnị mere ahịa ji ekwu okwu banyere Google dị oke ọnụ ahịa karịa Apple ugbu a?
Kpamkpam nke nsonaazụ ego kacha ọhụrụ nke ụlọ ọrụ abụọ ahụ gosipụtara, enwere ike ịpụta na Apple nwere nsonaazụ kacha njọ n'ime afọ iri, na-enwe oke ọdịda na ahịa, ihe na-echegbu onwe ya nke ukwuu nke elu nke Cupertino. Ahịa ahụ dara O meela ka otu mbadamba na-erughị $ 90, na-eduga na ezigbo ego nke ihe dịka $ 494.000.
N'ihe banyere Google ihe gbanwere na ọ bụ n'ihi ọnụahịa nke mbak anyị nwere ike ịnwe ugbu a ezigbo ego nke ihe dịka 498.000 nde dollar. N'ezie, na Google ugbu a ga-abụ ihe ruru nde dollar anọ karịa Apple, nke dị n'ụwa nke ọnụ ọgụgụ ndị a abụghị nnukwu ego mana maka onye ọ bụla n'ime anyị ọ nwere ike ịbụ mgbanwe site na ndụ dị mma gaa na nke jupụtara na okomoko.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Google agabigala Apple ma ghọọ ụlọ ọrụ kachasị baa uru
4 ngwa ịchịkwa gị Mac si iPhone